Odayaasha dhaqanka oo ka cabanaya faragalin lagu hayo Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Odayaasha dhaqanka oo ka cabanaya faragalin lagu hayo Odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay ku hanjabeen in hadii aan laga deyn faragalin ay sheegeen in ay ku hayso dowladda ay joojinayaan howsha loo xilsaaray.
Kadib kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho Odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale Kusimaha Raiisul wasaaraha Xukuumadda ayaa waxa ay Odayaasha ku sheegeen in dowladda KMG Soomaaliya ay fara galin ku hayso howlaha loo xilsaaray Odayaasha.
Qaar ka mid ah Odayaasha oo hadlay ayaa waxa ay sheegeen in aysan u dulqaadan doonin faragalinta ay sheegeen in ay ku hayso dowladda oo ay tilmaameen in ay sameysay Gudi farsamo oo ay sheegeen in aysan isfahmeynin, waxaana sidaasi awgeed ay xuseen in hadii aan loo madaxbaneenin howlaha loo diray aysan waxba qabaneynin.
Kusimaha Raiisul wasaaraha ahna wasiirka ganacsiga C/wahaab Ugaas Khaliif ayaa sheegay in Odayaasha ay u madaxbanaan yihiin soo xulida Ergada ansixinta dastuurka iyo soo xulida barlamanka cusub mustaqbalka Soomaaliyana uu gacantooda ku jiro.
Saxiixayaasha Roadmap-ka ayaa dhawaan waxa ay sameeyeen Gudi farsamo kaasi oo ay sheegeen in uu ka shaqeynayo soo xulida Odayaasha dhaqanka.